Barca Oo Heshay Laba Xiddig, Liverpool Oo Lagu Jabiyey Suuqa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Suuqa Maanta Oo Salaasa Ah - Gool24.Net
Barca Oo Heshay Laba Xiddig, Liverpool Oo Lagu Jabiyey Suuqa Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Suuqa Maanta Oo Salaasa Ah
May 19, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Sidii aad nooga barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa iibka ciyaartoyga ee ay wargeysyada waaweyn ee Yurub qoreen maanta oo Salaasa ah:
Xiddiga dhexda weerarka xigta uga ciyaara kooxda reer Germany ee Bayer Leverkusen ee Kai Havertz oo 20 jir ah, ayaa iska diidi doona fursad uu ugu wareegayo Liverpool, waxaanu dooranayaa inuu tago Borussia Dortmund, sida uu sheegay halyeygii xulka Germany ee Jens Nowotny. (Goal)
Juventus waxa suurtogal ah inay iibiso laacibiinteeda Miralem Pjanic oo 30 jir ah iyo Gonzalo Higuain oo 32 jir ah xagaagan, si ay u hirgeliso siyaasaddeeda ah inay dhinto kharashaadka ka baxaya, si ay taasi uga caawiso dhibaatada dhaqaale ee uu ku keenay caabuqa Korona. (Daily Mail)
Weeraryahanka reer Belgium ee Dries Mertens oo 33 jir ah ayaa diyaar u ah inuu heshiis cusub u saxeexo naadigiisa Napoli inkasta oo ay Chelsea xiisaynayso. (Wariyaha Talyaaniga ah ee Fabrizio Romano)
Barcelona ayaa horumar ka samaynaysa isku-dayga ay ku doonayso weeraryahanka Inter Milan ee reer Argentine ee Lautaro Martinez oo 22 jir ah iyo Khadka dhexe ee Juventus ee Miralem Pjanic oo 30 jir ah. (Mundo Deportivo)
Manchester United waxay soo noolaynaysaa xiisihii ay u qabtay difaaca Napoli iyo xulka qaranka Senegal ee Kalidou Koulibaly oo 28 jir ah, kaddib markii ay ogaatay in Liverpool ay si dhab ah u doonayso xiddigan. (Gazzetta dello Sport)
Goolyaha Liverpool ee Loris Karius oo 26 jir ah, kuma soo laaban doono tababarka kooxdiisa, kaddib markii uu bishii hore soo kansalay heshiis amaah ahaa oo uu ugu maqnaa Besiktas. (Daily Star)
Manchester City waxay ku kalsoon tahay in David Silva oo 34 jir ah uu ogolaan doono inuu saxeexo heshiis waqti kooban ah oo uu kusii joogayo Etihad Stadium inta laga dhamaystirayo xili ciyaareedka. Xiddiga reer Spain ayuu heshiiskisia hore ku egyahay June 30. (ESPN)
Manchester United waxay iibinaysaa goolhayaheeda 23 jirka ah ee reer Portugal ee Joel Pereira oo amaah ugu maqan kooxda reer Scotland ee Hearts, kaddib markii horyaalka dalkaas la kansalay. (Manchester Everning News)
Wolves ayaa heshiiska u kordhinaysa goolhayeeda 33 jirka ah ee John Ruddy, waxaanay siinaysaa sannad kale oo dheeraad ah. (Birmingham Mail)
Tababaraha Chelsea, Frank Lampard waxa uu rajaynayaa in ciyaartoyda ay qandaraasyadoodu dhamaanayaan ay qalinka ku duugi doonaan heshiisyo waqti kooban ah oo socon doona illaa inta xili ciyaareedka laga dhamaystirayo. Ciyaartoyda heshiisyadoodu dhamaanayaan waxa ka mid ah Willian oo 31 jir ah iyo weeraryahanka reer France ee Olivier Giroud oo 33 jir ah, kuwaas oo xor noqonaya 30 June. (Chelsea)
Tababaraha reer Argentine ee Mauricio Pochettino waxa uu xor u yahay inuu heshiis u saxeexi karayo kooxda uu doono, kaddib markii uu dhamaaday waqtigii uu xakamaha ugu xidhnaa Tottenham. (Telegraph)
Halyeygii AS Roma afka hore uga ciyaari jiray ee Francesco Totti oo 43 jir ah ayaa sheegay inuu ku dhowaaday inuu ku biiro Real Madrid, laakiin kaliya uu u diiday in kabtannimada aan la siinayn oo Raul uu haystay. (Libero)